५८० वर्षपछि सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण ! यस्तो देखियो - jagritikhabar.com
५८० वर्षपछि सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण ! यस्तो देखियो
तद्अनुसार १९ नोभेम्बर ।
कात्तिक शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथि । आज करिब ६ शताब्दी यताकै सबैभन्दा लामो अवधिसम्म चन्द्र ग्रहण लाग्दै छ । आज लाग्ने यो चन्द्र ग्रहण सन् २०२१ को अन्तिम चन्द्र ग्रहण हुनेछ । पछिल्लो ५ सय ८० वर्षमा पहिलो पटक यति लामो अवधिको चन्द्र ग्रहण लाग्दै छ ।
आज चन्द्रग्रहण भनिए पनि नेपालमा कुनै ग्रहण छैन, प्रभाव पर्ने छैन । भारतका केही स्थानबाट ग्रहण देखिने भए पनि त्यसको कुनै दोष लाग्दैन । ग्रहण बार्नुपर्ने कुनै आधार छैन । आज सूर्योदय बिहान ६ः२९ मा हुनेछ भने सूर्यास्त १७ः८ मिनेटमा हुनेछ । चन्द्रमा मेष राशिमा रहेको छ । कृत्तिका नक्षत्र परिध योग रहेको छ । देवता विश्वकर्मा र ग्रहदेव शनि रहेको छ । पूर्णिमा तिथि भएकाले आजको दिन आरधना गर्नेको संकल्प पूरा हुनेछन भन्ने मान्यता छ ।